တရုတ်နိုင်ငံက BRI မိတ်ဖက်နိုင်ငံများထံ ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၃၅၀ စာ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ ဟိုင်တျန့်ခရိုင်တွင် အသက် ၃ နှစ်မှ ၁၁နှစ် လူအုပ်စုအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်းမရှိသူ၏ အထူးကြပ်မတ်ကုသခံရမှုနှင့်သေဆုံးမှုနှုန်း ၁၅ ဆ ပို၍ မြင့်မားဟု ဆို
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ရှိ Bandaranaike နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ မေ ၂၆ ရက်က ရောက်ရှိလာသော တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရမှ လှူဒါန်းသည့် Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတစ်သုတ်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဩဂုတ် ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး အဆိုပြုချက် ပူးတွဲကူညီထောက်ပံ့ရန် ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၃၅၀ စာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဩဂုတ် ၂ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် အဆင့်မြင့် ညီလာခံအား တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးအတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံတို့က ကာကွယ်ဆေး ကူညီမှု၊ တင်ပို့မှုနှင့် ပူးတွဲထုတ်လုပ်မှု၌ ခိုင်မာသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် တိုက်တွန်းလျက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး အဆိုပြုချက်ကို ပူးတွဲကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယင်းအဆိုပြုချက်အား တက်ကြွစွာ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပြီး အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်စက် ပုံစံများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၇၇၅ သန်းအား ပူးတွဲကူညီထောက်ပံ့မည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းကာကွယ်ဆေးများအနက် သန်း ၃၅၀ မှာ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယင်းအဆိုပြုချက်အား ပူးတွဲကူညီထောက်ပံ့မှု လေးခုနှင့်အတူ ပူးတွဲထုတ်လုပ်မှု စတင်လျက်ရှိသလို အခြားသော စိတ်ဝင်စားသည့် နိုင်ငံများနှင့်လည်း ပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုကို ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးအား ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သာတူညီမျှစွာ ဖြန့်ချိနိုင်ရေး မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ တစ်လျှောက်ရှိနိုင်ငံများနှင့် အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေး ရရှိမှုနှင့် သင့်တင်မျှတစွာ ရရှိမှု တိုးမြှင့်ရန် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-08-02 18:22:54|Editor: huaxia
BEIJING, Aug.2(Xinhua) — China has delivered 350 million doses of vaccines to co-sponsors of the Initiative for Belt and Road Partnership on COVID-19 Vaccines Cooperation,aForeign Ministry spokesperson said Monday.
The spokesperson said inapress release that Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi chaired the Asia and Pacific High-level Conference on Belt and Road Cooperation in June this year. During the meeting, China and 28 countries jointly launched the Initiative for Belt and Road Partnership on COVID-19 Vaccines Cooperation, calling for stronger cooperation in vaccine assistance, export, and joint production.
China has been actively implementing the initiative and reached cooperation agreements with co-sponsors of the initiative onatotal of 775 million doses of vaccines, including in the form of concentrates, of which 350 million doses have been delivered, the spokesperson said.
Chinese companies have started joint production with four co-sponsors of the initiative and are discussing joint production with other interested countries, said the spokesperson.
China stands ready to carry forward the efforts with Belt and Road partners to promote the equitable distribution of vaccines globally and increase vaccine accessibility and affordability in Belt and Road countries and other developing countries, said the spokesperson. Enditem
Photo : A batch of Sinopharm COVID-19 vaccines donated by the Chinese government arrives at the Bandaranaike International Airport in Colombo, Sri Lanka, May 26, 2021 (Photo by Ajith Perera/Xinhua)